खाडीमा करोडपति बनेका नेपाली बार डान्सरहरू, रात बिताएकै लाखौं रियादसम्म !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
खाडीमा करोडपति बनेका नेपाली बार डान्सरहरू, रात बिताएकै लाखौं रियादसम्म !
काठमाडौं, २९ जेठ – प्रियंका ९नाम परिवर्तन० चार महिना दुबईको डान्स क्लवमा नृत्य देखाउँथिन् । पर्यटक भिषामा त्यहाँ पुगेकी प्रियंका नाच्नमा पारङ्गतसँगै शारिरीक बनोट राम्रो भएकी युवती हुन् । दुबई घुम्न जानुभन्दा अघि नेपाली डान्सबारमा केही समय काम गरेकी उनको काठमाडौंको खर्च धानिएन । विदेशमा कमाई हुन्छ भन्ने भएपछि उनी दुबई पुगेकी थिइन् । नभन्दै उनले दैनिक हजार भन्दा बढि रियाद टिप्स पाउन थालिन् ।
अहिले उनको काठमाडौंमा घर छ । लाखौं रकम घडेरी र शेयर कारोबारमा लगानी गरेकी छन् । भन्छिन्,‘नाच्ने पेसा पनि नराम्रो होइन । मनग्ये आम्दानी हुन्छ । त्यहि आम्दानीका कारणले अहिले म सम्पन्न छु ।’ उनले शेखहरूको प्रस्तावमा रात बिताउनचाहीँ मानिन् । तर, उनका कतिपय साथीले रात समेत बिताए जो उनीभन्दा तीन गुणा धनी छन् । ‘कमाउन जान्नेहरूका लागि सजिलो छ । गाह्रो मानेन भने हरेक चिजमा पैसा छ । विदेशमा न बद्नामीको डर न कुरा काट्नेहरूको भिड हुन्छ’, उनी भन्छिन्,‘पैसा कमाउनका लागि कला, गला र शरिर राम्रो भए समय लाग्दैन ।’
पिंकु नामले कतारका डान्स बार र धनाड्य समुदाय पुग्ने होटलहरूमा परिचित छिन् उनी । तीन महिनामा एक पटक नेपाल आउने र व्यावसायीक काम सकेर फेरि क्लव डान्सका लागि कतार पुग्ने पिंकुलाई अहिले पैसाको समस्या छैन । बरु, उमेर ढल्कने हो की भन्ने चिन्ता छ । ‘जति उमेर ढल्कन्छ कमाउन नसकिने हो की भन्ने डर लाग्छ ।’ ३२ बर्षिया उनी ७ बर्षअघिसम्म काठमाडौंका दोहोरी र डान्समा नाच्ने र सफा गर्ने काम गर्थिन् । कमाई राम्रो नभएपछि भिजिट भिषामा कतार पुगेकी उनको कमाई राम्रो हुन थाल्यो । त्यहाँको पवमा नाच्ने गरेकी उनी भन्छिन्,‘पहिला त एकाध नेपाली केटी देखिन्थे अहिले त युवकसहित ग्रुप डान्स पनि हुन्छ ।’
यी दुई उदाहरणमात्र हुन् । नेपालका धेरै बार डान्सरहरू विदेशी क्लवमा करोडौं आम्दानी हुने भएपछि राम्रा सहरतिर लम्किन थालेका छन् । कतारमा भिजिट भिषामा पुगेका युवती मध्यपूर्वका कयन देशका सहरहरूमा तीन महिनामै करोडपति बनेर फर्किने गरेका छन् ।
एकाध म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्ने, त्यसैको आडमा भिषा हात पार्ने र कतार, दुबई र मलेसीयाका पव, क्लव र बारमा डान्स गर्ने युवतीहरू पनि कम छैनन् । जो अहिले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहेका छन् । जसलाई मुस्लिम देशका धनाड्य शेखहरूले हजारौं रियादसम्म टिप्स र रात बिताएकै लाखौं रियाद लुटाएको थाहा छ ।
कसरी पुग्छन् त्यहाँसम्म ?
प्रायः नेपालका डान्स बार र क्यासिनोहरूमा नृत्य देखाउने युवतीहरू कतार, दुबई, मलेसीयालगायतमा राम्रो कनेक्शन भएका शेख र भारतीय नागरिकको नजरमा पर्ने गरेका छन् ।
क्यासिनोमा पैसा लुटाउन आएकाहरूको सम्पर्कबाट भिषा डिमान्ड हुने र सिधै त्यस्ता देशमा पुग्ने गरेका युवतीहरू बताउँछन् । कतिपयले युवकलाई पनि आफ्ना समुहमा राम्रो नाच्ने र सेवा दिनसक्ने युवती ल्याउनका लागि डिमान्ड हुने गरेको छ ।
‘सकिल भन्ने भारतीय नागरिकले क्यासिनोमा नाचेको देखेपछि मलाई विदेशमा धेरै भन्दा धेरै कमाई हुने बताए । उनीमार्फत मुम्बई हुँदै दुबईको क्लवसम्म पुगें’, पोखरामा समेत घर किनेकी प्रियाले भनिन्,‘वास्तवमा उसले भनेजस्तै टिप्स ज्यादा हुने रहेछ । मलाई पैसा कमाउन समय लागेन ।’
कम अध्ययन गरेका र मनग्गे पैसा कमाउने महत्वकांक्षा बोकेका युवतीहरूले राती डान्सबार र क्यासिनोलगायतका ठाउँमा सम्पर्क भएका व्यक्तिका आधारमा नै विदेशी भुमी टेक्ने गरेका छन् । जसले उनीहरूको आर्थिक जीवनमा आमुल परिवर्तन हुन थालेको छ ।
‘केटाहरूले पनि टिप्स पाउँछन् तर केटीको तुलनामा एकदमै कम । कतिपय शेखले त गोरी नेपाली युवती जसले राम्रो नाच्न जान्दछिन् उनलाई ल्याउनु भनेर डिमान्ड नै गर्छन्’, १० वर्षदेखि यहि क्षेत्रमा काम गरेका एक युवक भन्छन्,‘उनीहरूको मागअनुसारका युवती लगे हामीले पनि राम्रो टिप्स पाउँछौं र उनीहरूले नाचेरै करोडभन्दा माथि कमाउँछन् ।’
यसरी चाँडो पैसा कमाउने युवतीहरूले प्रायः नेपालका विभिन्न सहरमा अचल सम्पत्ति जोडेका छन् । धरान, पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा छोटो अवधिमा घरघडेरी जोड्ने कम छैनन् ।
गायन क्षेत्रमा लोकप्रिय बन्दै गायीका रश्मी राई